सप्तरीको लक्ष्मी ,वल्लभ,नर्सिङ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षा लथालिङ्ग | Saptari Today
Home प्रदेश खबर सप्तरीको लक्ष्मी ,वल्लभ,नर्सिङ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षा लथालिङ्ग
सप्तरीको लक्ष्मी ,वल्लभ,नर्सिङ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षा लथालिङ्ग
६ श्रावण २०७८, बुधबार २२:००
याे सप्तरी जिल्लाकाे पुरानाे ग्रामिण सामुदायिक विद्यालय हाे । तिलाठी काेइलाडी गाउँपालिका ७ स्थित लक्ष्मी ,वल्लभ,नर्सिङ माध्यमिक विद्यालय तथा वहुमुखी क्याम्पस वभनगामाकट्टी हाे ।
यस विद्यालयकाे स्थापना वि स २००६ सालमा भएकाे थियो । यस विद्यालयका दाता परिवार समाजसेवी ,वुद्विजीवी,महापुरुष तथा महामहिम आदरनिय स्वर्गीय लक्ष्मी ,वल्लभ र नर्सिङ हुन । यिनले स्कुल मात्रै हाेइन २२ विघहा जमिन दिई र स्कुलकाे भवन समेत वनाए । विद्यालय पैसा कमाउने लाेभले हाेइन , आफ्नाे नाम र इज्जतकाे लागि खाेलिएकाे थियाे ।
यिनीहरू मरेर गए पनि यिनीहरुकाे नाम अमर रहेका छन् । यस विद्यालयमा धेरै प्रधानाध्यापक आए ,गए तर पूर्व प्र.अ जवाहर लाल देव जस्तो ब्यक्ति न आएकाे छ , न आउने वाला छ ।
यस विद्यालयलाई मा .वि देखि लिएर प्लस टु तथा स्नातक (विएड) सम्मकाे शिक्षा संचालन गर्नमा महत्त्वपूर्ण याेगदान पुर्‍याएका छन् । शिक्षामा मात्रै हाेइन जिल्लाकाे सवै भन्दा वढी विद्यालयकाे भवनहरु तथा पूर्वाधार विकासमा सफल प्र. अ काे रुपमा ख्याति कमाउन सफल रहेका छन् ।
अहिले यस विद्यालयमा शिक्षाकाे अवस्था कमजाेर हुँदै गएका छन् । लगभग दस वर्ष देखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएका कारण शैक्षिक अवस्था देखि भाैतिक पूर्वाधार विकासकाे अवस्था कमजोर हुँदै गएकाे छ । समिति नभएका कारण १८ वटा शिक्षक दरवन्दी खाली रहेकाे छ ।
शैक्षिक संस्थालाई स्थानीय तहमा दिएका कारण शिक्षा क्षेत्रकाे अवस्था खस्किदै गएका छन् । यस विद्यालयमा एक दक्ष इमानदार ,अनुशासित र ज्ञानवान शिक्षक प्रधानाध्यापककाे खाँचो रहेका छन् ।
पछाडि पोस्टनोबेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले किने नेपालगन्ज मेडिकल कलेज
अगाडि पोस्टसुखीपुरमा ३९ औं वि.पि. कोइराला स्मृति दिवस मनाइयो